ချက်ကြမယ် ပြုတ်ကြမယ် Urgent Cook! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ချက်ကြမယ် ပြုတ်ကြမယ် Urgent Cook!
ချက်ကြမယ် ပြုတ်ကြမယ် Urgent Cook!
Posted by Ma Ma on May 11, 2014 in Food, Drink & Recipes | 25 comments
Urgent cook ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
World Mother’s Day မှာ အမေ့လက်ရာကို သတိရနေကြမယ့် ကမ္ဘာတစ်လွှားက သားသမီးတွေ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်ကြဖို့…………
လက်တည့်စမ်းချင်ကြမယ့် ရွာထဲက Easy cook, lazy cook, healhty cook, professional cook, yummy cook, …..
cook cook cook တွေ လက်တည့်စမ်းနိုင်ကြဖို့ …………
အစားကောင်းစားရရင် ခင်မင်သူတွေကို သတိရတယ်ဆိုသလို ….. :s:
လွယ်ကူသက်သာ မြန်ဆန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ချက်ပြုတ်ထားပြီး စားချင်စဖွယ်လှပတဲ့ အစားအစာတွေ ချက်နည်းပြထားတဲ့ လင့်ခ်လေးတစ်ခုတွေ့တယ်။
သိပြီးသူတွေ ရှိကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်တော့ ခုမှတွေ့ပြီး သဘောကျလို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ချင်သူတွေ စမ်းသပ်ပြီး တင်ပေးရင် ကောင်းမယ်လို့ တွေးပြီး ………..
အသားလိုလို့ အရိုးတောင်းလိုက်တာ ……….
ဒါဆိုရင်တော့ ဒေါ်ဖွားမေကွတ်ကို စောင့်ဖတ်ရအုံးမှာပေ့ါ……….
အားဂျင့်ကွတ် ကြောင်သားဟင်းလျှာဆိုရင် ကမ္ဘာတောင် ကျော်သွားမလား မသိဘူး။
တော်ပြီ မမကိုယ်တိုင် ချက်ကျွေးတာကိုမှ စားချင်တာ။
စားလို့ ရ မရ တော့ အာမ မခံဘူး။
အနော့ကို ပြုတ်စားတဲ့ နေရာတော့ပထမတန်းလို့ ပြောကြတာပဲ။
အားဂျင့် ကွတ် ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသားးးးး
အားဂျင့်နည်းနဲ့ ဒီ က လောက်ဇီကွတ်နဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင်ဘာ အရသာထွက်မတုန်းမသိ။
KZ’s ထမင်းဆိုင် စားဖိုမှူးကောင် လေးကို ချက်ခိုင်းမယ်
စားဖိုမူးးး ကောင်လေးး က ၂ယောက် ရှိတယ်။
အဝှာပိုကြီးတဲ့ကောင်လေးကို ပြောတာတဲ့.. ဖွက်အထားနဲ့
မီးးးပြောဒါနော် အဲလိုဟုတ်ဖူးနော် များကို ဟင့်
KZ’s ထမင်းဆိုင်က စားဖိုမှုးကောင်လေး နှစ်ယောက်ရှိတယ်။
ပြုတ်၊ဖုတ်၊လှော်၊ကင်၊ပေါင်း၊ကြော်ထဲ… ကြော်များသလား… လို့..။
အဲဒါနဲ့.. တနှစ်တနှစ်… စားအုံးဆီတန်ချိန်သိန်းပေါင်းများစွာ.. သွင်းရ…။
ခုတော့ ဒီမှာအကင်ဆိုင်တွေ ပေါလာတယ်။
အကင်ကလည်း တူးတာတွေက ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပြန်ပါရောလားးးးး
အမေကတော့ အားအားရှိ ဆီပြန်ချည်းစားနေလို့.. မြန်မာဟင်းထဲ ဆီပြန်ဟင်းများသလားလို့တောင် သံသယဖြစ်မိတယ်..
အနော်ကတော့ ရခိုင်ဟင်းတွေ ခွေဇီ.. အမေကတော့ ရခိုင်သားနဲ့ ညားမလား မသိဘူးတဲ့..
ဟိ… အခုတော့ ပဲမကြိုက်တဲ့အနော်က.. ဟိဟိ…
အခုတော့ ပဲမကြိုက်တဲ့အနော်က.. ………..
link က သွားကြည့်တာ ဗီယက်နမ်စာ တွေရယ် ၊မွာကျီး ခေါ်တဲ့ ကောက်ညှင်းမုန့်လုံးရေပေါ်ကို မြေပဲမှုန့်+သကြားမှုန့်ရောစားတာပဲ တွေ့တယ်။
(အဲဒီ မွာကျီး ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ခေတ္တ အမေဂျီးကားရောက် အဘဖေါကို သတိရပါတယ်)
Posted on May 11, 2014 by K •4Comments
Muah Chee (From top left, clockwise] – Using the steam, pan-fry, boil & microwave cooking methods.
We wrote on how to make muah chee in 10 minutes using the microwave previously and we received quiteafew questions from readers asking whether it’s possible to make muah chee using other cooking methods.
We tried various cooking methods (i.e. steam, pan-fry & boil) to make muah chee in this post.
First and foremost, prepare the mixture using the following recipe.
– 150g of peanut/sugar mix
I placed the bowl of mixture in boiling water and steamed it for7minutes. The outcome isasolid sticky white paste.
Steam method – SUCCESS
METHOD 2. BOIL
I poured the mixture in the boiling water. The white gluey paste formed in about3seconds (almost like egg whites). The paste was too soft and watery. It does not have the chewy muah chee texture.
Boil method – FAILURE
METHOD 3. Pan- Fry
I poured the mixture onto the hot non-stick pan. The white paste formed after 10 seconds – again the outcome isasolid sticky white paste.
Pan-fry method – SUCCESS
METHOD 4. MICROWAVE
Still my preferred method. It just takes 3.5 minutes in the microwave.
Microwave method – SUCCESS
Cut the sticky paste into small cubes and coat them well with the peanut/sugar mix.
So which cooking method produces the best muah chee?
It’satie between the microwave and steam methods. Both cooking styles producedasolid chewy paste which is ideal for making muah chee.
The boiled method isadisaster. The outcome is hardly edible – soft and lifeless.
Verdict – There are many different methods to make muah chee and none of them took more than 10 minutes. So…. make your own muah chee today!
P.S. You can get black sesame powder in Shine Korea Supermarket to replace the peanut/sugar mix!
Posted on May 8, 2014 by K •4Comments
TIP – If you do not want to invest inabottle of teriyaki sauce, you can make your own sweet sauce withafew simple ingredients from the pantry.
HOW? Mix2tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of sugar and2tablespoons of hot water.
ဟိ ဗီယက်နမ် ငါးရံ့ခေါက်ဆွဲစားမလား…
ဒါမှမဟုတ် ဘဲပေါက်စနဲ့ သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်ရွက် အတို့လေးစားမလား…
ဖြစ်သေးပါဘူး ဝါးတီးလေး ရွာထဲမှာတင်မှ… ခွိ
ဘယ်လို ၀ါးတီးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားတယ်။